September 2020 – Dainiksamchar
सम्झना र निर्मलाको सम्झनामा दीप प्र’ज्ज्वलन : ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’
September 30, 2020 admin 2716
काठमाडौं, १४ असोज । ब ला’त्कारपछि ह,त्या गरिएका दुई किशोरीको सम्झनामा बुधबार (आज) काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दीप प्र’ज्ज्वलन गरिएको छ। अनेरास्ववियूले आज साँझ कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त र बझाङकी १२ वर्षीया सम्झनाको सम्झनामा दीप
होन्डाले ल्यायो क्लासिक मोटरसाइकल, रोयल इन्फिल्डसँग सिधा प्रतिस्पर्धा
September 30, 2020 admin 1816
काठमाडौं : होन्डाले आज एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै भारतीय बजारमा क्लासिक डिजाइनमा होन्डा हाइनेस सीबी ३५० मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । निकै आकर्षक डिजाइनमा आएको यो मोटरसाइकलले भारतमा नयाँ बजार लिने होन्डाले अनुमान गरेको छ
September 30, 2020 admin 1775
कक्षा ११ र १२ का सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाइ एकाबिहान आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना !
September 30, 2020 admin 2022
कक्षा ११ र १२ को परिक्षा संचालन बारे आयो यस्तो अत्यन्तै जरुरी सुचना ! ११ र १२ कक्षाको परीक्षा कहिले हुने, कसरी हुने कि नहुने, अब भगबानलाई मात्र थाहा छ । सरकार वा शिक्षा मन्त्रालय
September 30, 2020 admin 2149
काठमाडौं– भगवान विष्णुको अ’वतारका रुपमा पू’जा गरिने स्वर्ण क’छुवा नेपालमा फेला परेको छ। विश्वभर यो प्रजातीको कछुवा देखा परेको यो पाचौँ पटक हो। भगवान विष्णुले पृथ्वीलाई ध्व’स्त हु’नबाट जोगाउनका लागि स्व’र्ण क’छुवाको रुप धारण गरेको
September 30, 2020 admin 1242
काठमाडौँ । कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दा होस् या मन्दिरमा प्रवेश गर्दा होस् हामीले घण्टी बजाउने गर्छौं। घण्टी बजाउनुलाई हिन्दु धर्ममा अति नै शुभ मानिन्छ। यसले सकरात्मक उर्जा मिल्छ। हरेक दिन पुजा गरेर घण्टी बजाउनाले
September 30, 2020 admin 1489
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई लिएर देशैभरीका नागरिकहरुलाइ आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! काठमाडौ । कोरोना भाइरस महामारी न्यूनीकरणका लागि आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीपछि बन्द रहेको पोखरा–नयाँदिल्ली बस सेवा यही असोज १५ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ।
भोलिदेखि यी देशहरुबाट हुँदैछ नियमित उडान, अब घर फर्कन दूतावासको सूचीमा भर पर्न नप,र्ने,
September 30, 2020 admin 1577
काठमाण्डौ – खाडीका चार देशबाट भोलि अर्थात अक्टोबर १ देखि नियमित उडान सुरु हुँदैछ । खाडीको देश साउदी, कतार, कुवेत र ओमानबाट भोलिदेखि नियमित उडान हुने भएको हो । नियमित उडान भएपछि यी देशबाट स्वदेश
September 30, 2020 admin 1201
रामेछापको दुर्गममा अवस्थित सरकारी स्कुलमा पढेको एकजना सामान्य किसानको छोरो अहिले नेपाली जनताको मनमुटुमा बास बस्न सफल भएको छ । देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर सबैको घरमा उज्यालो भित्र्याउने अभियन्ता कुलमान घिसिङ, विद्यालय पढ्दाको अनुभव यसरी
माता लक्ष्मी ले बनाइदिनुहुनेछ मालामाल, अपनाउनुहोस् धनकी देवीसँग जोडिएका यी १० महाउपाय
September 30, 2020 admin 1457
काठमाडौं । कात्तिकको औंशीको रातमा तिहार पर्व मनाइने गरिन्छ । यो वर्ष तिहारको लक्ष्मी पुजा कात्तिक १९ गते बिहीबार परेको छ । यस दिन धनकी देवी लक्ष्मीको पुजा हुने गर्छ । यो पनि मान्यता छ
LEX 18 agenda conversation: Job club (117551)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (109550)
Hello world! (109113)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (107992)